Dowladda Libiya oo shaacisay in ay si buuxda u hanteen Tripoli. - Awdinle Online
Afhayeenka Dowladda Liibiya ee ay Caalamka aqoonsan yihiin, Duuliye Maxamed Qanunu ayaa sheegay in ay si buuxda ula wareegeen guud ahaan magaalladda Tripoli iyo Deegaanadda ku hareeraysan.
Shabakadda Wararka Al-wasad oo soo xigatay Afhayeenka ayaa sheegtay in ay Ciiddanka Dowladda maanta si rasmi ah gacanta ugu qabteen Kontoroolka magaalladda Tripoli oo ay ku jiraan Garoonka Diyaaradaha Tripoli iyo mid kale ee Falool Airport iyo Deegaanada Cayni Zaaraat iyo Waadi Al-rabiic.
Ilo-wareedyo ayaa sheegay in Ciiddankii daacadda ahaa Marshal Khaliifa Xaftar ay ka wada baxeen Degmooyinkii ay kaga sugnaayeen magaalladda Tripoli, kuwaasi oo kala ahaa Cayn Zaara, Abu Saalim iyo Qasri Bin Gashiir.
Taliyayaasha Ciiddanka Xaftar waxaa la sheegay in ay u ambabaxeen magaalladda Bani Waliid oo dhanka K/bari kaga toosan magaalladad Tripoli.
Marshal Khaliifa Xaftar oo ku sugan caasimada dalka Masar ee Qaahira waxa uu ku baaqay in ay Ciiddanka Turkiga ka wada baxaan gudaha dalka Libiya, si fursad loogu helo in ay wada hadlaan Dowladda GNA iyo Kooxdiisa LNA.
Waxa uu sheegay inta ay Ciiddanka Turkiga joogaan gudaha Liibiya aysan la hadli doonin Dowladda Libiya ee ay QM aqoonsan tahay.
Dhawaan ayay aheed markii saraakiil calooshood u shaqaystayaal ah oo ka socday Ruushka ay iskaga bexeen Liibiya ka dib guuldarooyin ay la kulmeen maleeshiyaad Khaliifa Xafter oo taageero ka hela Masar, Ruushka, Sucuudiga iyo Imaaraadka Carabta.
Dowladda Liibiya ee ay Caalamka aqoonsan yahay ayaa taageero dhaqaale iyo Milatari ka hesha Dowladda Turkiga,waxa ayna hada dadaal ugu jirtaa sidii ay gacanta ugu dhigi laheed guud ahaan dalkaasi.
Previous articleDiyaarad sida agab caafimaad oo ka degtay Dhuusamareeb
Next articleMaamulka G/Hiiraan oo ku baxay shaqaaqo ka dhacday duleedka Beledweyne